कोरोना संक्रमणदर हरेक दिन बढ्दैः एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिँदा कतिले ज्यान गुमाए ? - Nepalese Times
भीम रावल नेतृत्वको एमाले कार्यदलको बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ?4घण्टा अघि
के बुद्ध एअरको जहाज बिग्रिएकै थिएन ? घटनाको रहस्यबारे यसरी हुँदै छ अनुसन्धान ! (पत्रसहित) 8 घण्टा अघि
कोरोना संक्रमणदर हरेक दिन बढ्दैः एकैदिन यति धेरै संक्रमित थपिँदा कतिले ज्यान गुमाए ?
नेप्लिज संवाददाता १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १६:५६ (2 महिना अघि) २४३ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमतिको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २७ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
९ हजार ७८३ पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ४६७ जना र ४ हजार ८७८ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार १४४ गरी ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ८१६ जना निको भएका छन् । शुक्रबार थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ लाख ९३ हजार १०९ पुगेको छ । तीमध्ये ९ हजार ८३४ जनाको ज्यान गएको छ । ६ लाख ५२ हजार २६१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अहिले नेपालभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३१ हजार १४ जना रहेका छन् । जसमध्ये २७ हजार ८२० जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । ३ हजार १९४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । कोरोनाका बिरामीमध्ये ६८६जना आईसीयू र १६१ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।